Sainte Marie Nakatona avokoa ny sekoly nanomboka omaly
Mpiasan’ny fahasalamana iray miaraka amin’ny zanany kely iray no fantatra fa lasibatry ny tsimok’aretina COVID 19 any amin’ny distrikan’i Sainte Marie. Ny alakamisy tamin’ny herinandro lasa teo no nahiahiana ny fahasalaman’izy ireo ka notiliana.
Nilazana ireo mpandeha tonga fa tsy maintsy mandalo fanokanan-toerana manokana na "Confinement obligatoire de 14 jours" izy ireo ary manao taratasy fanekena na “lettre d'engagement”. Nisy moa ireo mpandeha 5 tamin' ireo 249 tsy nanaiky ka dia nalefa niverina avy hatrany teo noho eo ihany tamin'ny fiaramanidina nahatongavany niverina any Eoropa.. Misy 16 nisafidy any amin’ny hotely. Ahoana ny antoka sy ny fanaha-maso fa tena tsy nivoaka ny trano? Miezaka mampiseho ny fanjakana fa misy ny ezaka, saingy miharihary ny tsirambina. Tsy voahara-maso velively ireo olona tonga avy any Frantsa navela nody an-kahalalana na nambara aza fa nanao taratasy fanekena, nalaina ny adiresy,… Mivoaka ny tranony soa aman-tsara ka asa na tsy finiavana hanaraka ny toromariky ny filoham-pirenena sy ny governemanta na ahoana. Ny fanapahan-kevitra faran’ny Filankevitry ny minisitra manamafy sy manampy ny efa voalaza teo aloha rahateo moa dia ny takarivan’ny talata, raha efa nialohan’izay no nahatongavan’ireo mpandeha. Tena nisy mihitsy ny mpandeha avy any Frantsa naneho, fa tsy misy atao “mise en quarantaine” izany, ary tsy voahara-maso. Loza miditra avy hatrany, raha misy amin’ireo navela nandeha ambara fa hitokana no sanatria efa misy ilay valanaretina. Amerikanina dia nanokana 60 miliara dolara, ny sinoa 240 miliara dolara, ny Italianina nanokana 25 miliara dolara ka ny 15 hanarenana ny toekarena, ary ny 10 hiadiana ny coronavirus. 3,7 tapitrisa dolara monja kosa ny antsika, izay 0% mahery kely amin’ny an’ireny, ka tsy i Madagasikara mihitsy no tokony hanao tsirambina sy hihebohebo, fa efa vonona ka toa manao tsirambina. Ekena fa ao anatin’ny « stade 0 » isika, saingy tsy afaka ny hahatoky tena be eto foana.